Uyifaka njani i-Photoshop CC kwi-Ubuntu | Ubunlog
UPablo Aparicio | | Imizobo, Tutorials, Ubuntu
Kwiinkqubo ezisebenza ngeLinux zininzi iisoftware, ndingathi ngokungathi ziWindows, kodwa ingxaki esinayo abaguquleliEzo besizisebenzisile kwezinye iinkqubo ezisebenzayo ziindlela ezindala nje. Yiyo loo nto nangona iGimp yinkqubo entle yokuhlela imifanekiso, uninzi lwethu luyathanda Photoshop ukwenza ezinye (ayizizo zonke) ukuchukumisa. Into embi kukuba ayinakufakwa Ubuntu. Hayi? Ewe unako, ewe. Kwaye ndingathi iyasebenza 99%.
Into yokuqala endifuna ukuyithetha kukuba andizimiselanga ukukhuthaza ubuqhetseba okanye nantoni na enjalo. Esi sikhokelo sesabo basebenzisi banayo ikopi esemthethweni yesicelo kwaye bafuna ukusisebenzisa ku-Ubuntu, kuba sisaqhuba kwiwayini, kule meko ukusuka PlayonlinuxNdicinga ukuba kufanelekile ukuyenza kwinkqubo ngokukhawuleza okukhulu kunenkqubo yokusebenza eveliswa nguMicrosoft. Ngale nto ithethwayo, ndiya kwiinkcukacha zokufaka i-Photoshop CC 2014 kwiLinux, endiye ndayivavanya kwi-Ubuntu 16.04 nakwi-Ubuntu MATE 16.04.
Uyifaka njani iPhotoshop usebenzisa iPlayOnLinux
Ngaphambi kokuba ndiqale kufuneka nditsho ukuba yintoni eyacaciswayo kwesi sifundo ayisebenzi kwiFotohop CC 2015 Yeyiphi eyona nguqulelo yangoku. Iyasebenza ngo-2014 kwaye, nangona ndizamile ingxelo engama-32, akukho nto indenza ndicinge ukuba ayinakusebenza ngohlobo lwe-64-bit. Inqaku yile, inokusebenza, kodwa isenokungasebenzi. Nanga amanyathelo ekufuneka uwalandele ukuqhuba iFotohop ku-Ubuntu:
Siza kufuna inguqulelo ye-Photoshop CC 2014. I-Adobe ayisenazo ezifumanekayo ukuze zikhutshelwe, kodwa kukho ikopi yolingo kwiphepha le Izixhobo zoYilo lwePro.
Sifaka iPlayOnLinux. Singayenza kwiZiko leSoftware kwiinguqulelo ezininzi ze-Ubuntu okanye ukusebenzisa umyalelo sudo apt-fumana ukufaka playonlinux. Ukuba awunayo ipakethe ekhoyo, ungaya ku iwebhusayithi yakho, khuphela iphakheji ye-.deb kwaye uyifake.
Masiye kwimenyu Izixhobo / Lawula iinguqulelo zewayini kwaye, kuzo zonke iinguqulelo ezikhoyo, sijonge kwaye sifake 1.7.41-PhotoshopBrushes. Ukuyifaka kufuneka sichukumise utolo lwasekunene esiza kubona embindini.
Sibuyela kwimenyu ephambili kwaye nqakraza Faka iqhosha lenkqubo.
Ezantsi ngasekhohlo, sicofa u "Faka inkqubo engekho kuluhlu".
Sikhetha ukhetho "Faka inkqubo kwi-drive entsha ebonakalayo."
Sinika igama. I-Photoshop iya kuba ntle. Ndizongeze ezi "C" zimbini ngasemva kuba bendisele ndiyifakile. Okwangoku asinakusebenzisa izithuba.
Kwiwindow elandelayo esiyibonayo kufuneka siphawule ezi zinto zintathu kwaye ucofe ngokulandelayo.
Sikhetha uhlobo lwewayini 1.7.41-PhotoshopBrushes. Ukuba asiyiboni, senze into engalunganga. Kufuneka siqale phantsi.
Emva koko sikhetha ukhetho olunama-32-bit. Ukuba usixelele ukuba awufumani nto kwaye ufuna ukuyifaka, siyayenza.
Iwindow iya kuvela apho sinokukhetha ukuba yeyiphi na iWindows yenkqubo eza kusebenza. Kuya kufuneka sikhethe iWindows 7. Qaphela oku, okungagqibekanga kubeka iWindows XP.
Sifaka ezi layibrari:
Nje ukuba zonke zihlolwe, sicofa Okulandelayo.
Okwangoku iyakusicela ukuba sifumane ifayile yokufaka iFotohop, ke siyikhangele kwaye siyikhethe. Ukufakwa kuya kuqala.
Ukuba siza kuqala uvavanyo lweentsuku ezingama-30 ngaso nasiphi na isizathu, kuya kufuneka sikhuphe kwi-intanethi ngaphambi kokuba siqhubeke. Nje ukuba singaxhunyiwe kwi-intanethi, sizama ukungena, nto leyo eya kusibonisa impazamo kwaye isivumele ukuba sizame ukufikelela kamva.
Ngoku kufuneka sinyamezele kwaye silinde ukuba ifake. Abanye abasebenzisi, njengomncedisi, babone iimpazamo ngexesha lofakelo, kodwa ungothuswa. Yinto "eqhelekileyo" kwi-PlayOnLinux kwaye inkqubo iyaqhubeka nokufakwa kwayo nangona kubonakala ngathi iphumile. Ukuqiniseka, sinokulinda malunga nemizuzu emi-5 ngaphambi kokubetha Okulandelayo.
Okokugqibela, sinokubeka indlela emfutshane kwidesktop esinokuthi ngokukhululekileyo sihambele kwenye ifolda ukumilisela iFotohop. Singayibeka loo ndlela imfutshane kwisiqalisi esimiselweyo Ubuntu kwaye sisebenza ngaphandle kweengxaki, kodwa okufanayo akwenzeki ku-Ubuntu MATE, apho ihlala inika iimpazamo ezininzi.
Eminye imisebenzi, enjengokudibanisa, inokungaphumeleli. Ukuba azisebenzi kakuhle, singaya kwimenyu Hlela / Ukukhetha / ukuSebenza kwaye sukukhangela «Sebenzisa iprosesa yemizobo».
Ngaba ukwazile ukufaka iPhotohop ku-Ubuntu?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ubuntu » Uyifaka njani i-Photoshop CC kwi-Ubuntu
uJulius mejia sitsho
Ngokoluvo lwam i-gimp yeyona ndlela ilungileyo yokwenza i-Photoshop kuba ujongano lwayo luyafana kakhulu nokuba kuziwa ekusebenzeni ngamanqanaba kunye nezinye izixhobo zokulungisa imifanekiso
Umphuhlisi wamajoni sitsho
Ndiyenzile kwakudala kudala kuphela ngokukhuphela ingxelo yangoku yewayini kunye nokuvula ngokwesiqhelo, nangona kwimeko yam ndisebenzisa ingxelo ephathekayo.
Phendula uMphuhlisi weJoni
I-GIMP sisixhobo esihle sokubamba iifoto esingafuneki ukuba nomona ngefotoshop, ekwayinkqubo entle.
UDanny et sitsho
Abo bathi i-Gimp sisixhobo esihle sokuphinda ubambe iifoto esinganyanzelekanga ukuba umonele i-photoshop, yazi okuncinci malunga nokuhlelwa kwemifanekiso kunye nokusetyenziswa kwe-Photoshop.
Phendula kuDanny et
hahaha ndifunda amagqabantshintshi ndihleke kancinci kwaye ndivumelana ngokupheleleyo nawe danny et
kodwa zilungile elowo nalowo ngokungcamla kwakhe kunye nobizo 😉
Ness Thor sitsho
jonga tom rodriguez
Phendula Ness Thor
UTom rodriguez sitsho
Ukuba ungafaka yonke le suite, ndiza kukuthengela umphathi we-morgan
Phendula kuTom Rodriguez
ULuis Acosta sitsho
UYesu Ibarra uyabona
Phendula uLuis Acosta
UYesu uBenjamin Yam Aguilar sitsho
Ngokuchanekileyo njengabo bathi i-Gimp ayinanto yakwenza nomona, abayisebenzisi ukwenza umsebenzi wobungcali, kuba ayisebenzi imibala ngokwendalo njenge-pothoshop ngaba iba yingxaki ekuhambeni kwexesha ekuprintweni imibala itshintshiwe, kwaye iyinto kubonakala ngathi ayenzelwanga nokuba isonjululwe kuba umsebenzisi sele eyicelile kwaye akhonto ayibekileyo
Phendula kuYesu uBenjamin Yam Aguilar
UCarlos Catano sitsho
Ndifuna ukufaka iphambili: V okanye umzobi okungenani
Phendula uCarlos Cataño
UJuan Salgado sitsho
Kukho izixhobo ezaneleyo kwiLinux, kuyilo. Kuphela kukuba bazuze ulwazi oluncinci lwekhompyuter.
Phendula uJuan Salgado
UAntonio José Casanova Peláez sitsho
#GIMP lolunye uhlobo olululo kwi #photoshop kwaye ayinanto yakwenza nomona okwesibini
Phendula u-Antonio José Casanova Peláez
I-Harry Martinez sitsho
Ndikhuphela i-GIMP Photoshop: v
Phendula uEl-Harry Martínez
Inkscape, Krita, eyona GIMP idumileyo. Zininzi iindlela ezilungileyo kakhulu. Ndizakuyibona le ivela kwi-PCC.
I-GIMP ayisiyi-100% yokutshintsha i-Photoshop, nanjengoko sonke sifuna ukuba njalo. Ukuba unayo i-PSD eyenziwe kwi-Photoshop usebenzisa iifolda okanye amaqela ukulungiselela umaleko, okanye ukuba kusetyenziswa iimaski zomaleko, ifayile ayinakusebenziseka kwi-GIMP.
Kulungile, ndiyavuma ukuba i-GIMP sisixhobo esihle, ungashiya ifotoshop, kodwa uthini ngomzobi? Ndicinga ukuba kukho isithuba.
Kude kube i-GIMP ingalawuli i-ICC CMYK ayinathuba.
Kwenzeka into efanayo nge-Inkscape.
Akukho ndlela yokuyisebenzisa njengokutshintsha okubhaliweyo.
Ndiza kuqhubeka ndikhangele phambili kumhla apho ndingashiya iWindows ndiziva ndikhululekile ngokwenene ...
I-Gimp yinkunkuma! Ilula kwaye ngokuthe ngqo ..
I-Gimp ayinakuze igqwese kwi-Photoshop, le app isusela kwiminyaka yoo-6 kwaye ibe ngumgangatho kumzi-mveliso wokufota, uyilo lwegraphic, umzekeliso kunye nobugcisa. Qho ngonyaka, iAdobe, yongeza inkqubela phambili kunye nophuculo; Kuzo zonke iimveliso zabo. Umzekelo, kuhlobo lwe-CS6 awunakuguqula ukubonakala kwebrashi njengokuyijikeleza, ngelixa ikwiinguqulelo zeCC, ungasiguqula ukubonakala kwebrashi. Kwiinguqulelo ze-CS bekungekho kangako ukwenziwa ngokwezifiso kunxibelelwano ekwenzeni kube mnyama okanye ukukhanya, kodwa kwiinguqulelo ze-CSXNUMX olo khetho luye lwavela. I-Gimp lilitye elihle le-Photoshop kodwa alinakho ukubonelela nge-adobe, ndingathanda ukukubona ucela umsebenzi kwinkampani yokuprinta apho i-resume yakho ithi awusebenzisi i-photoshop, yi-Gimp kuphela, ukubona ukuba baqeshe.
I-gimp sisoftware eyamkelekileyo ukuba uyi-newbie ekuhlelweni kweefoto, kodwa ngekhe uphinde uthi ayinanto yakwenza ne-Photoshop.
NjengoMyili woBuchule beMizobo, kunye nomthandi weLinux, ndiyakuxelela ukuba i-gimp isecaleni kweFotohop, ungabali i-Adobe suite epheleleyo, ene-Lightroom, iPremier, i-Illustrator phakathi kwabanye, kwikhompyuter yam ndinebhokisi yokuqala yokusebenzisa iLinux xa ndi Andizukusebenza ngemizobo, ndenze oomatshini ababonakalayo ngaphakathi kweLinux ukuze bakwazi ukwakha iWindows kwimeko apho kufuneka ndenze into kwi-adobe.
Nangona kunjalo ngelishwa ... kwaye ndithi ndiyazisola, ngenxa yeendleko kunye nokungaqhelekanga kweqonga layo, iiMacs ziselona khetho lilungileyo kuyilo lweGraphic, kwaye ndiyakuxelela ukuba ndikhangele ezinye iindlela kodwa andikuboni kukhanya Ekupheleni kwetonela, ndiyathemba ukuba kungekudala inkampani izakuvela ephuhlisa isoftware yokuhlela kunye noyilo enokukhuphisana neAdobe, okanye enye isoftware yoyilo ye3D enokuqhuba iLinux kwaye igqithe amanqaku esiwabona kwiiMacs.
Ndenze onke amanyathelo kodwa andifumani fayile ye-PhotoshopC ukuyifaka 🙁
UCarlos Yruegas sitsho
Ayinakufakelwa, xa ndibeka ityala leentsuku ezingama-30 kwaye emva kokulinikela ukuba lifake, lihlala lifakelwa kodwa liyarhoxiswa, ndifumanisa ukuba kukho ukusilela kwaye ndizamile ukuqala kwakhona ikhompyuter, ndikhangela i-firewall kunye nezinye izinto, Sele ndiyivulile ikhompyuter yam kwaye awungekhe. Ndiyayidinga ngokwenene, ndifunda uyilo lwegraphic kwaye i-GIMP sisixhobo esingenamsebenzi kwaphela kuyilo lwegraphic, ukuba umntu ufumene enye indlela okanye enesisombululo, nceda ubhalele kum, enkosi.
Phendula uCarlos Yruegas
Isonjululwe! Ngokucacileyo kuye kwafuneka ndivale kwaye ndingasihoyi eso silumkiso, emva koko yandicela ukuba ndenze indlela emfutshane, kwaye ndiyifumene ye-photoshop.exe kwaye yandisebenzela. Enkosi ngeposi! usindise ikamva lam lomsebenzi.
Ewe, ndiza kushiya ingxelo: Ungawubeka umhla wenqaku ekuqaleni kwawo. Ukusilela ukwenza njalo sisiphene esiqhelekileyo kwi-Intanethi.
Ndiyifaka njani ifayile yomntu? Ndinika ifayile yesi-2 kula ma-32-bit enye kwaye indithumela kwiphepha elingenalo nofifi lokuba ndenzeni
Uyifaka njani i-Kubuntu 16.04 LTS kunye nento oza kuyenza ngokulandelayo